Meeshaaleen kontiroobandii birri miiliyoona 9.5 tilmaamamu to’atame – Fana Broadcasting Corporate
Meeshaaleen kontiroobandii birri miiliyoona 9.5 tilmaamamu to’atame
Finfinnee, Hagayya 16,2011 (FBC) – karaa seeraan alaa galuuf kan ture meeshaaleen faayaa fi bilbilli sochootuun 520 birrii miiliyoona 9.5 tilmaamamu to’annoo jala oole.
Meeshaaleen faayaa fi bilbilli sochootuun (moobayilli) birri miiliyoona 9.5 tti tilamaamamuu karaa kontiroobaandii sochoo’aa ture to’atamuu Ministeerri galiiwwaanii beeksise.
Ministeerichi guyyaa har’aa buufata sakkattoo Yaa’aballootti faaya garaagaraa KG 190 fi bilbila sochootuu baayyinni isaa 520 birri miiliyoonaa 9.5 tti tilmaamamu to’atamuu beeksiseera.
Meeshsaalee kun konkolaataa lakkoofsi gabaatee isa koodii 3A- 59037 A.A kan ta’en socho’aa otuu jiru to’atame.
Ministeerichi akka beeksiseetti guyyaa har’aa kana Jigjigaa buufata sakkatoo Toogoo Caaleetti namtichi kophee kophee jijjiiraaf qabate keessatti maallaqa biyya alaa dabarsuu otuu yaaluu to’annoo jala oolu isaa beeksiseera.
Namtichi Lu’uul Gabrayees jedhamu doolaraa Ameerikaa kuma 53 karaa seera alaan biyyaa baasuuf otuu yaaluu Gumuruuka Jigjigaa sakkattoo Toogoo Caalee fi miseensa poolisii Federaaln to’atamuu isaa ministeerichi beeksise.
Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa halkaan keessa naannoo sa’aatii 5:00 konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa Koodii 3 02764 S.A ta’emeeshaalee kontiroobaandii birri miiliyoona 2 tilmaamamu fe’e gara keessatti seenuuf otuu jedhuu to’annoo jala ooluun isaa ni yaadatama.
Finfinneetti dhaabbilee gatii hin malle dabalanirratti tarkaanfin fudhatame
Fooramiin Biiznasii Ityoo Tuuniziyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira
Eeyyamni oomisha albuudaa sadarkaa olaanaa; 3 kenname
Adoolessa darbe daldala alaarraa $ miil. dhibbi 2 fi miil. 52.23 argame